Elcomsoft Phone Password Breaker Pro.3.00 Build 106 Incl Serial (70.3 Mb) - သန်လျင်သားနည်းပညာ
Home / Softwares(ဆိုင်ရာ) / Elcomsoft Phone Password Breaker Pro.3.00 Build 106 Incl Serial (70.3 Mb)
by သန်လျင်သားနည်းပညာ on 19:47:00 in Softwares(ဆိုင်ရာ)
မင်္ဂလာပါ Black Berry,Apple(iPhone,iPod,iPad),Windows Phones များမှာ Password ထည့်ပြီး
Lock ကျတဲ့အခါ ပြန်ဖွင့်ချိန်မှာ Password မေ့သွားရင် Password Recovery and Backup
လုပ်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ။မူရင်းဆိုဒ်မှာ Pro Version ကို US 199 $ နဲ့ ရောင်းတာ
==>exe ဖိုင်ကို Run as Administrator ဖြင့် run လိုက်ပါ။
အောက်ကပုံအတိုင်း Install ကို ကလစ်ပြီး အင်စတောလုပ်ပါ။
အင်စတောလုပ်စဉ် Purchase လုပ်ခိုင်းရင် Next ကိုသာကလစ်ပါ။
==>အင်စတောပြီးလို့ ဆော့ဝဲ တက်လာရင် ခဏပိတ်ထားလိုက်ပါ။
==>Serial ကိုကလစ်ပါ။Name and Serial ကို Notepad ဖြင့်တက်လာပါမယ်။
အဲဒီဖိုင်လေးကို Minimize(အနှုတ်လက္ခဏာဖြင့်) ခဏပိတ်ထားပါ။
==>ဆော့ဝဲကိုဖွင့်ပြီး အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံအတိုင်း serial ကိုထည့်ပြီး Activate လုပ်ပါ။
တကယ်လို့..Serial ကိုဖွင့်တဲ့အခါ Notepad ဖြင့်မတက်ပါက အောက်မှာပေးထားတဲ့ Serial
ကိုထည့်ပြီး Activate လုပ်ပါ။
Name: Dmitris Mateckis
Elcomsoft Phone Password Breaker Pro application which usesaquick
and easy method to recover the password, smart phones and other
portable devices you. This software isapassword recovery tool for all
the BlackBerry smartphone Ray like iPhone, iPad, iPod Touch and iPhone
version will use stands.
* Access to information stored on the phones password
* Ray Black decode phones and iPhone
* Password Recovery iPad and Touch devices
* Decrypt keychain data on the device (such asapassword for email,
Wi Fi, Web sites and various other applications)
* Implemented without the need to install special software to work with smartphone
* Compatible with all versions of iTunes (including 10.5) and IOS (above IOS 5)
* Using AES NI instructions to speed up password recovery black-Ray
- If necessary insert series
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 19:47:00